ကျေးဇူးတင်ပါတယ် John! ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသည်မည်သူမဆိုစတင်လုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသေချာစွာနှိုင်းယှဉ်သောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောပုံဖော်ခြင်းကိုတွေ့ရခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်!
သြဂုတ်လ 31 ရက် 2010 ခုနှစ် 7:01 နာရီ
ဤကဲ့သို့သော infographic ကိုလုပ်ခြင်း၏အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းမှာပုံမှန်မှတ်စုများယူခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်အကြောင်းအရာကိုပိုမိုခိုင်မာစေခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုရေးနေချိန်၊ ဘေးတိုက်ရှိုးစကားပြောသူပုံလေးကို တွေးပြီး လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ခု ထည့်သွင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းသည် စာသားမှတ်စုအားလုံး၏ နယ်ပယ်မှ အလွယ်တကူ သတိရလာမည့် အရာမဟုတ်ပါ။